LEGO 71395 Super Mario 64 လား။ ကိုးကားချက်များအားအမြန်ပြေးခြင်း
29 / 09 / 2021 29 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 328 Views စာ0မှတ်ချက် 71395 Super Mario 64 လား။ ပိတ်ပင်ခြင်း, ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block, .ရာဝတီ, အီစတာကွကျဥ, အီစတာကြက်ဥ, Lego, Lego စူပါမာရီယို, Luigi, မာရီယို, အညွှန်း, စူပါမာရီယို, စူပါမာရီယို 64
လာမည့် Lego ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block နာမည်ကြီး speedrunning နည်းစနစ်ကိုရည်ညွှန်းတာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင်၎င်း၏ဖြန့်ချိမှုမတိုင်မီ၎င်းမှခွင့်ပြုထားသော update ကိုပေးသည် Lego စူပါမာရီယို စကင်ဖတ်နိုင်သောစတစ်ကာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန် app ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block set ကိုလက်ခံရရှိသူများအားသိုဝှက်ထားသော Power Stars ၁၀ လုံးကိုတွေ့ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းတွင်အချို့သောအမြန်နှုန်းနည်းလမ်းများအတွက် Easter ကြက်ဥတစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေလိုသူမည်သူမဆိုအတွက်သင်၏ spoiler သတိပေးချက်အဖြစ်ယူပါ။
p အဖြစ်art တွင်ပါ ၀ င်သောအင်္ဂါရပ်များ ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Blockနှင့်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု Lego Luigi နှင့် Mario ရုပ်ပုံများသည်သင့်အား p ခွင့်ပြုသည်artပုံစံတစ်ခုတွင်ပြန့်ကျဲနေသော Power Star ၁၀ လုံးကို Scavenger Hunt တွင်ရှာဖွေသည်။ ညွှန်ကြားချက်များရှိသဲလွန်စများက၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုသဲလွန်စများပေးထားပြီးနံပါတ်ကိုးမှာ 'ပြီးပြည့်စုံသောခုန်ခြင်း' ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။
အချို့ကဤဆိုလိုရင်းကိုအကျွမ်းတဝင်မရှိသော်လည်း Ashnflash သည်အထက်ပါဗွီဒီယိုတွင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအရာများကိုပြသသည်၊ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့် Mario's fast- ရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှု။
YouTuber ကတင်ပြသည့်အတိုင်း ဗန်ဘူရင် ၂၀ဂိမ်းကိုအလွန်လျင်မြန်စွာပြီးစီးလိုသောကစားသမားများက၎င်းအားကစားပွဲ၏ရူပဗေဒကို သုံး၍ ၎င်းအားမာကျောသောအရှိန်ဖြင့်နောက်သို့ခုန်ကာလှေခါးထစ်များနှင့်ပိတ်ထားသောတံခါးများမှတဆင့်တွန်းပို့ပေးသည်။
နောက်ပြန်ခုန်လိုက်ခြင်းသည်နာမည်ကျော်ကြားသောနည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် စူပါမာရီယို 64 speedrunners များသည်၎င်းကိုအသေးစိတ်အာရုံစိုက်သည် Lego ဒီဇိုင်နာများသည်ဖန်တီးသောအခါဂိမ်းအတွက်ငွေပေးသည် ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block.
Lego ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်မကြာမီရရှိနိုင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းအားမည်သို့လမ်းညွှန်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသည် အသေးစားအဆင့်အပန်းဖြေ နှင့် ကိန်းဂဏန်းများ မူလ digital equivalents နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဟိ ပထမ ဦး ဆုံးသုံးသပ်ချက်များ ၎င်းတွင်လျှို့ဝှက်ချက်များပါ ၀ င်သည်ကိုအတိအကျသိလိုသူများအတွက်အုပ်စုသည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။
← Lego Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? သတ်မှတ်ချိန်သည်နောက်ကျသောဇာတ်လမ်းတွဲပေါ်မူတည်သည်
Lego Ideas Home Alone ဟုသတ်မှတ်ထားသော minifigures များရှိသည် →